'Tis the Season ... ka benchmark Against Sizinal nddị | Martech Zone
'Tis the Season… na Benchmark Na-emegide Oge Akara
Friday, December 22, 2017 Friday, December 22, 2017 Douglas Karr
Maka saịtị dị ka nke m, oge ezumike nwere ike ịda mba ka m na-enyocha nyocha. N'ozuzu okporo ụzọ bụ ala tinyere organic okporo ụzọ dị ka m na-ege ntị gbanwere ka ezumike mode na-amalite ịkwụsị mgbalị ruo mgbe New Year. Ọ bụkwa oge m ga-eji mesighachi onwe m na ndị ahịa m obi ike na anyị na-eme ọfụma n’agbanyeghi ihe ọghọm anyị na - ahụ n’ọnwa ọnwa ma ọ bụ n’ọda.
Isi ihe na-eme ka obi sie gị ike bụ iji Google na ọnọdụ dị ka benchmark iji nyochaa okporo ụzọ gị. Ezigbo ndi enyi m nwere Indianapolis pesti akara ụlọ ọrụ. Dị ka ọdịda amama ini etuep, pesti ọrụ tụlee budata. N'ime nchịkọta Google, anyị na-ahụ ihe dịka 40% nke okporo ụzọ anyị hụrụ kemgbe oge ọkọchị. Ikiri stats na-agbada dị ka ọnwa nke ọnwa nwere ike ịkpasu iwe, mana ọ bụ ihe okike.
Nke a bụ ileba anya na nyocha niile nke njikwa maka pesti na United States. Edere mmasị ahụ dị ka ndeksi nke mmasị, yabụ ị nwere ike ịhụ na mmasi kachasị elu dị n'oge ọkọchị ma ugbu a ọ bụ ihe dịka 47.
Imechabeghị. Ikwesiri iburu n'uche na enwere mpaghara ala di n'ime obodo a nke nwere ogologo oge na nkpirisi, ma obu obuna onwa oyi obula, yabụ oburu na ibu ahia nke obodo ichoro igbanwe nyocha a na mpaghara obodo. . Anyị ahọrọla mpaghara mpaghara Indianapolis, ma ị nwere ike ịhụ na ndeksi ahụ bụ 25.
Nyere usoro iheomume a, anyị nwere ike ịkọwapụta okporo ụzọ saịtị megide ya. Ọ bụrụ na ọmụrụ nwa dị na 25% nke oke ọmụrụ nwa site na oge ọkọchị, anyị nwere ike iji ahịa anyị na saịtị anyị tụnyere nke ahụ. Onye ahịa a gbadara ihe dịka 35% - ọbụghị 75% kemgbe oge ọkọchị, yabụ anyị nwere ezigbo ntụsara ahụ na ha ka na-eme karịa nkezi. Anyị okporo ụzọ okporo ụzọ na-arị elu kwa afọ mana ọ na-agbada ihe dịka 27%. Enweghị m oke nchekwube. Anyị enweela oge dị nro na Midwest ma e jiri ya tụnyere afọ ndị ọzọ n'ihi ya, anyị kwesịrị ịtụ anya ka ọchịchọ na-arị elu kwa afọ.
You lelee anya oge mmasị ị na-enwe na azụmaahịa gị ma gosipụta ya megide ha?
Tags: Analyticsọnọdụ googlesizinal ogeoge
Na 2018, Data ga - eme ka akụ na ụba akụ na ụba
Ahịa Ahịa: Ahụhụ nke Ahụmịhe Unboxing